Ama-Proteas asiqale ngokunqoba isigaba esisha futhi athola amaphuzu okuqala e-WTC
Ama-Standard Bank Proteas abuyisele usiko labo lokunqoba futhi bathola amaphuzu abo okuqala awu-30 e-ICC World Test Championship (WTC) ngesikhathi ehlula i-England ngama-runs awu-107 kusele usuku ne-session kumdlalo wokuqala we-series enemidlalo emine e-SuperSport Park, e-Centurion ngeSonto.
Njengoba abatholanga ngisho iphuzu elilodwa kwi-series yabo yokuqala ye-WTC e-India bekubalulekile ukuthi bazilungise ngokushesha futhi manje banethuba lokuphinde bathole amaphuzu awu-90 kwimidlalo emithathu esele.
Ukunqoba okubalulekile kuma-Proteas njengoba bazithobile emuva kokuthi i-England izithole esikhundleni esihle kuphela usuku lesithathu besalelwe izinti eziyisishagalolunye futhi umphumela usushoda ngama-runs awu-250. Bebengeke bakwazi ukwenza njengase-Kingsmead ekuqaleni konyaka njengoba badedela i-Sri Lanka.
Umdlalo ukhombise ukuthi uhlelo le-franchise linamandla kunalokhu okushiwoyo njengoba abadlali abalethwe eqenjini bengenaso isipiliyoni sokudlala ikhilikithi yezizwe – u-Anrich Nortje, u-Rassie van der Dussen no-Dwaine Pretorius – bayidlalile indima yabo.
Umsebenzi ka-Nortje kumdlalo wakhe wesithathu kuphela we-Test emuva kwemidlalo embili enzima e-India ububalulekile. Akathathanga izinti ezinhlanu kuphela kumdlalo kodwa i-innings yakhe yama-runs awu-40 nenhlanganiso yama-runs awu-91 no-Van der Dussen ibidingeka ekunqobeni njengokuba ngaphambili kwi-innings yokuqala ngama-runs awu-103.
Ama-Proteas isinike ama-caps awu-11 ezinyangeni eziwu-27 ezidlule kuqala ngo-Aiden Markram no-Andile Phehlukwayo kudlalwa ne-Bangladesh futhi uma kucatshwangwa ukuthi ukudlala umdlalo wokuqala e-India ayenzima kulonyaka cishe kwaba izindaba zempumelelo.
Isahluko sanamhlanje sakhiwe ngesimilo sokushwiba esigcine i-England ngaphansi kwencindezi usuku lonke futhi kwenza bathole izinhlanganiso ezimbili kuphela ezinakekile – u-47 phakathi kwa-Rory Burns no-Joe Denly no-46 phakathi kwa-Joe Root no-Ben Stokes – hayi izinhlanganiso ezinkulu ebezidingwa i-England ukuze inqobe.
u-Burns (84 off 154 balls, 11 fours) uqede ethole ama-runs amaningi kwi-England, u-Root yena wathola u-48 (101 balls, 8 fours).
Kuphindile ukuthi i-England ilahlekelwe izinti kwabashaya phakathi nendawo nasezansi njengoba izinti zokugcina eziyisikhombisa ziphume ngama-runs awu-64 emuva kwa-7/39 kwi-innings yokuqala.
u-Kagiso Rabada ushwibe kahle wathola u-4/103 okumnike izinti eziyisikhombisa kumdlalo abashwibayo bedlala kahle.
u-Quinton de Kock ube i-Man of the Match ngokuthola ama-runs awu-129 waphinde wakhipha abadlali abayisishagalombili ngokunqaka kumdlalo.
i-Sunfoil Education Trust (SET) ithole u-R240 000 ngama-boundaries no-six abashaywe kumdlalo yiwona womabili amaqembu kanye nezinti ezikhishiwe.
u-Petersen ubizwe okokuqala kuma-Proteas u-Burns uhola i-England ezama ukujaha umphumela oyirekhodi u-Markram ukhishiwe kwimidlalo esele kwi-England Test series u-Boucher ugculisekile ngenqubekelo phambili yama-Proteas u-Jacques Kallis umenyezelwe njengomeluleki wokushaya kuma-Proteas Bayisithupha abadlali abasha ababalwe kwiqembu lama-Proteas lama-Test India wrap up series to claim 120 Test match points u-Hamza uletha ukukhanya ekushayeni kwama-Proteas u-Linde uzothatha indawo ka-Maharaj kumdlalo we-Test wokugcina Inkani ka-Maharaj no-Philander ibambezela ukunqoba kweNdiya u-Kohli uhole usuku lamarekhodi aphuliwe kwi-India ngokushaya